उखु किसान विस्थापित हुने अवस्था : कृषकले पाउन बाँकी रू. ५ अर्ब | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर उखु किसान विस्थापित हुने अवस्था : कृषकले पाउन बाँकी रू. ५ अर्ब
on: ३० श्रावण २०७५, बुधबार ०९:४० मुख्य खबर, समाचार
उखु किसान विस्थापित हुने अवस्था : कृषकले पाउन बाँकी रू. ५ अर्ब
समर्थन मूल्य र समयमै भुक्तानी नपाउनु प्रमुख समस्या
काठमाडौं । सरकार र चिनी उद्योगीहरूका कारण उखुखेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै गएको पाइएको छ । सरकारले समयमै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्ने र उद्योगीहरूले समयमै किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिने गर्नाले उखुखेतीबाट किसान विस्थापित हुने अवस्था आएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घले बताएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘एकातिर सरकारले समयमै मूल्य निर्धारण नगरिदिने र अर्कातिर चिनी उद्योगले उखु किनेबापतको रकम समयमै भुक्तानी नदिने गर्नाले उखु किसान निरुत्साहित भएका छन् ।’ त्यसैले उखु उत्पादनमा खासै सुधार आउन नसकेको उनले बताए ।
महासङ्घका अनुसार चिनी उद्योगले उखु किसानलाई करीब रू. ५ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अध्यक्ष मैनालीले उखु काट्नुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे तापनि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । ‘उखु उत्पादन भई विक्री गर्दासमेत सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण नगरेका कारण उखु किसान अन्य क्षेत्रमा आकर्षित हुन थालेका छन्,’ उनले भने । सरकारले उखुकृषकका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिने हो उखुकृषक यस क्षेत्रबाट विस्थापित हुने उनले बताए । समयमै भुक्तानी नपाउने र उत्पादन लागतअनुसार न्यायोचित मूल्य पनि नपाउने भएपछि किसानले उखुखेती मास्दै गएको मैनालीले जानकारी दिए ।
महासङ्घले सरकारले कायम गर्ने गरेको न्यूनतम मूल्य पनि निकै कम हुने गरेको बताएको छ । उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रतिक्वीण्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा निर्धारण गरिएको थियो भने आव २०७४/७५ मा ५ रुपैयाँ वृद्धि गरी ५ सय ३६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर २०७४÷७५ मा निर्धारण गरिएको उखुको मूल्यमा उद्योगीले १० रुपैयाँसम्म कम गरी किसानलाई भुक्तानी गरिरहेको महासङ्घको आरोप छ । महासङ्घका अनुसार आव २०७४/७५ मा किसानले चिनी उद्योगलाई रू. ११ अर्ब मूल्यबराबरको उखु विक्री गरेका छन् ।
व्यावसायिक उखुखेती प्रवर्द्धनका लागि उखुको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ । सर्लाही, महोत्तरी, नवलपरासी र बारालाई उखुको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताइएको छ । त्यस्तै, उखु उत्पादनको क्षेत्रमा देखिने दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नेपाल चिनी तथा उखु बोेर्ड गठन गर्न निकै लामो समयदेखि सरकारलाई अनुरोध गरे पनि सरकारले यसप्रति चासो नदेखाएको महासङ्घले बताएको छ ।